China China mugadziri 19 padiki rack yekumisikidza 48V 50Ah lithium ion bhatiri (LiFePO4) yeterecommunication Manufacturer uye mutengesi | LIAO
1. Iyo 19 inch rack inokwira 48V 50Ah LiFePO4 bhatiri kurongedza kwezuva simba rekuchengetedza masisitimu.
Muenzaniso Nha. Dzorera-F4850T
Zita remagetsi 48V
Chezita chinzvimbo 50Ah
Max. kuenderera mutero iyezvino 60A
Max. kuenderera kubuda zvino 60A
Kurema Inenge 30kg
Divi 440mm * 320mm * 133mm
Kushanda Yakakosha yakagadzirirwa telecommunication base chiteshi, zvakare inogona kushandiswa kweKudzosera-simba, zuva＆masystem emhepo, kuchengetedza simba kumba, UPS, nezvimwe.
3. Yakakwirira kuchengetedzeka: Inenge yakachengeteka lithiamu bhatiri mhando inozivikanwa muindasitiri.
4. Nekutaurirana funnis yeRS232 kana RS485.
5.Parlellel basa: rinogona kunge rakafanana kushandiswa kuwedzera chinzvimbo.
6. Hapana chiyeuchidzo, simba rakakura, ine SOC chiratidzo.
Solar Energy (Simba) Sisitimu Sumo
Iyo yezuva simba rekugadzira system ine emagetsi ezuva bhatiri mapakeji, ezuva macontroller, uye mabhatiri (mapoka). Kana iwe uchida iro rinoburitsa simba rezuva simba system kuti ive AC 220V kana 110V, iwe zvakare unofanirwa kumisikidza inverter.
Solar magetsi ekugadzira masystem akapatsanurwa kuita off-grid magetsi ekugadzira masisitimu, grid-yakabatana magetsi ekugadzira masystem uye akagovanisa magetsi ekugadzira masystem:
1. Iyo-grid simba gadziriso sisitimu inonyanya kuve inoumbwa nemagetsi ezuva maseru, macontroller, uye mabhatiri. Kana simba rekubuda iri AC 220V kana 110V, inverter inodikanwa zvakare.
2. Grid-yakabatana magetsi ekugadzira system inoreva kuti iyo yakananga yazvino inogadzirwa nemagetsi ezuva inoshandurwa kuita inochinjika yazvino inosangana nezvinodiwa zvemagetsi magetsi grid neiyo grid-yakabatana inverter uyezve yakanangana zvakananga kune yeruzhinji gridhi. Grid-yakabatana magetsi ekugadzira masisitimu akaisa pakati hombe-chiyero-yakabatana magetsi masitepisi, ayo anowanzo ari epasi-chikamu chikamu magetsi. Chinhu chikuru ndechekuti iro simba rinogadzirwa rinotakurirwa zvakananga kune gridhi, uye iyo gridhi inoendeswa zvakafanana kupa simba kuvashandisi. Nekudaro, rudzi urwu rwechiteshi chemagetsi rine hombe kudyara, nguva refu yekuvaka, nenzvimbo hombe, uye haina kukura zvakanyanya. Iyo yakaparadzirwa diki-diki-yakabatana giya-inogadzira magetsi system, kunyanya iyo photovoltaic chivakwa chakabatanidzwa magetsi gadziriro sisitimu, ndiyo inowanda ye grid-yakabatana magetsi gadzira nekuda kwezvakanaka zvekudyara kudiki, kukurumidza kuvaka, diki tsoka, uye hukuru hwebumbiro rutsigiro.
3. Yakagoverwa magetsi gadziriro, inozivikanwawo seyakagadzwa simba kugadzirwa kana kugoverwa magetsi, inoreva kumisikidzwa kwediki photovoltaic magetsi magetsi panzvimbo yemushandisi kana padyo nenzvimbo yekushandisa magetsi kusangana nezvinodiwa zvevamwe vashandisi uye kutsigira huripo hwekuparadzira network Kushanda kwehupfumi, kana kusangana nezvinodiwa zvezvinhu zviviri izvi panguva imwe chete.
Pashure: Abs casing 2000+ macircule hupenyu lithium ion bhatiri 12V 100Ah neBMS
Zvadaro: Diki diki mwenje kurema 6V 10Ah Lifepo4 bhatiri pack neyakavakirwa-mukati BMS
Yakanyanya kushanda tembiricha yakakwira mukurumari 12V 60Ah lithium bhatiri pack ye online yekutarisa system
Kutengesa kupisa 19 padiki racking inokwira UPS bhatiri 48V 40Ah lithium ion bhatiri pack
Diki diki mwenje kurema 6V 10Ah Lifepo4 bhatiri pack neyakavakirwa-mukati BMS
Simba rekuchengetedza gorofa dhizaini 12V 10Ah LiFePO4 bhatiri pack neBMS
2000+ kutenderera hupenyu hwesimbi casing 12V 12Ah LiFePO4 bhatiri remwenje system
ABS casing inotakurika magetsi magetsi 48 Volt 30Ah lithium bhatiri pack